‘नर्सहरूमाथि श्रमशोषण छ’
त्रिभुवन विमानस्थलबाट ५० ग्रामभन्दा बढी सुन विदेश लान खोजे जफत
गगन थापाको प्रश्न- “प्रधानमन्त्री ज्यू, संस्थाको विश्वास जोगाउने कि ढल्न दिने ?”
“चीनका नीति निर्माताहरू के सोच्छन्, अनुमान गर्नै गाह्रो”
‘शेयर राइड’ लाई सिन्डिकेटको अवरोध
“रोजगारी नभए निर्वाह भत्ता दिइनेछ”
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मानित
फागुन पहिलो साता प्रज्ञा भवनमा ‘बडिबिल्डिङ च्याम्पियनसिप’
नेपाली महिला टोली ‘वुमन्स टी-२० स्म्यास’को फाइनलमा
डा केसी शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा
अन्तर्वार्ता/विचारसोमवार, माघ ८, २०७४
गुणस्तरीय रोजगारी र सेवासुविधा वृद्धिलगायतका माग राख्दै आन्दोलित नेपाल नर्सिङ संघ र सरकारबीच ४ माघमा भएको सम्झौताबारे संघकी कार्यवाहक अध्यक्ष गंगा थापा भन्छिन्, “सरकारले एक महीनाको समय मागेकाले आन्दोलन स्थगित मात्र गरिएको हो।”
आन्दोलन कसरी टुंगियो ?
नर्समाथि जारी श्रमशोषणको अन्त्य, निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सलाई पनि सरकारी सरहको सेवासुविधा, नर्सिङ्ग काउन्सिल महाशाखाको स्थापनालगायत ११ बुँदे माग राखेर हामीले आन्दोलन गरेका हौं । नर्सहरूमा जागरण ल्याउनु पनि आन्दोलनको उद्देश्य हो । त्यसैले आन्दोलन टुंगिएको होइन, एक महीनाका लागि स्थगित मात्र भएको हो ।
तपाईंले भनेझैं नर्सहरूमाथि श्रमशोषण नै भइरहेको हो त ?
मुख्य समस्या नै चरम श्रमशोषणको हो । नर्सहरूलाई रोजगारी छैन, स्वयंसेवक भएरै बस्नुपरेको छ । जागिर पाइहाले पनि मासिक रु.४–५ हजार मात्र तलब दिइन्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि विभेद छ । सुरक्षा पनि छैन ।
दोषी को त ?
खासगरी निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले नर्सलाई शोषण गरिरहेका छन् । एउटै संस्थामा काम गर्ने सवारी चालकले मासिक रु.२०–२५ हजार तलब पाउँदा रातभर ड्यूटी गर्नुपर्ने नर्सलाई रु.५ हजारमा राखिएको छ । यो कसरी न्यायसंगत हुनसक्छ !
सेवासुविधा राम्रो नभएको जान्दाजान्दै पनि नर्सिङ्ग विषयप्रतिको आकर्षण नघट्नुको कारण चाहिं के हो ?
नर्सिङ्गको विश्वव्यापी रोजगारी बजार राम्रो छ । त्यसैले धेरैको आकर्षण बढेको हो । अर्को कुरा यो पेशाको महत्व घरबाट शुरु भएर टोल, छिमेक, समाजहुँदै स्वास्थ्य संस्थासँग जोडिन्छ । यो स्वतन्त्र पेशा हो । तर, यसो भन्दैमा श्रमशोषण स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
आफ्ना सबै माग पूरा हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?
आशावादी छौं । हाम्रा केही माग तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने त केही समय लाग्ने पनि छन् । तर, सरकारको प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण कुरा हो । एक महीनाभित्र ठोस कदम नचालिए आन्दोलन गर्ने विकल्प त छ नै !
शनिवार, माघ ५, २०७५ महिला क्रिकेटः आयोजक थाइल्याण्डसँग नेपाल ७० रनले पराजित
शनिवार, माघ ५, २०७५ सरकार लोकतन्त्र मास्ने षडयन्त्रमाः देउवा
शनिवार, माघ ५, २०७५ पाठकसँग जोडिंदै कविता
कला/साहित्य पाठकसँग जोडिंदै कविता
रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चलखेल
ब्लग बीपीलाई फाँसीको माग
बिहिवार, माघ ३, २०७५ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव ९ फागुनदेखि
मंगलवार, माघ १, २०७५ बैकुण्ठ जान नसकेको ‘निरमाया’